बैतडीमा लोप हुँदै भैँसी, पशु सेवा कार्यालयले ल्यायो भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
Sat, Apr 21, 2018 | 03:45:22 NST
बैतडी, पुस २६ – बैतडीमा भैँसी लोप हुँदै गएको छ । बैतडीका धेरैजसो किसानले भैँसीपालन व्यवसायलाई छोड्दै गएकाले भैँसी लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
भैँसीमा लाग्ने खरी रोग, भैँसीको स्याहारसुसारका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने र दूधको बजार पनि राम्रो नभएकाले भैँसी पालन व्यवसाय संकटमा परेको पशु प्राविधकले बताएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाटन बैतडीका अनुसार पछिल्लो समयमा भैँसी पालनमा किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ । चरिचरनको अभाव, विभिन्न रोग तथा भैँसी पाल्नका लागि बढी मेहनेत गर्नुपर्ने भएका कारण भैँसी पालन व्यवसाय संकटमा परेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाटन बैतडीका प्रमुख बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नवीन घिमिरेले बताउनुभयो ।
कुनैबेला परिवारको लागि लुगाफाटो किन्नुपर्दा होस् अथवा चाडपर्व मनाउन होस् भैँसीको घिउले नै गर्जो टार्ने चलन थियो । तर पछिल्लो समयमा भैँसी पालनमा किसानको आकर्षणनै घटेपछि भैँसीको घिउनै पाउन छोडेको गाँजरीका जनक धामीले बताउनुभयो ।
पहाडी जिल्लाबाट मासुका लागि थारो भैँसी समेत व्यापारीले किन्न थालेपछी भैँसी झन लोप हुँदै गएको शंकरपुरका मुरली अवस्थीले बताउनुभयो ।
भैँसी पालनमा आकर्षण बढाउन भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
भैँसी पालनको जिल्ला भनेर चिनिने बैतडीमा भैँसीनै लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले भँैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट जिल्लाका पाटन नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र हाट गाविसमा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. नवीन घिमिरेले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम लागु भएका नगरपालिका तथा गाविसमा भैँसीपालक किसानको २५ जनाको समूह गठन गर्ने र उनीहरुलाई विभिन्न सहयोग गर्ने घिमिरेले बताउनुभयो । कार्यक्रम लागु भएका ठाउँमा प्रति किसान गोेठ सुधारका लागि पाँच हजार अनुदान दिइनेछ भने भैँसीमा लाग्ने रोगको नियन्त्रणका लागि जुकाको औषधि, बाह्य परिजिवी विरुद्धको खोप र खरी रोग विरुद्धको औषधि निशुल्क प्रदान गरिने छ ।
यस्तै किसानलाई पोषिलो घाँस उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि घाँसको बीउ र बेर्ना सित्तैमा उपलब्ध गराउने जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज भटट्ले बताउनुभयो ।